Noraisin’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, teny Faravohitra indray, afakomaly, ny ambasadaoro amerikanina, Robert Yamate. Tsy nisy nipika ny dinika. Na izany aza, voalaza fa niompana amin’ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny sy ny resaka kolikoly ary koa ny filaminana ny votoatin’ny fihaonana eo amin’ny roa tonta. Fantatra koa ankoatra izany fa manahy ny amin’ny mety hisehoan’ny korontana eto amintsika ny Amerikanina manoloana izao raharaham-pirenena izao.
Hotanterahina ny talata faharoa aorian’ny fanendrena ireo loholona ny fivorian’ny eo anivon’ny Antenimierandoholona, araka ny voalazan’ny lalàna. Midika izany fa tokony hatao ny 9 febroary izao etsy amin’ny lapa maitso Anosikely izany. Hampiantso azy ireo amin’izany fivoriana izany ny didy havoaka eo anivon’ny filankevitry ny minisitra amin’ity herinandro ity. Anisan’ny anton’ny fivorian’ireo loholona 63 ny fananganana ny birao maharitra ahitana ny filoha sy ny filoha lefitra ary ny mpampaka-teny. Eo koa ny fananganana ireo vaomiera samihafa.
Efa vonona avokoa ny fotodrafitrasa handraisana ireo loholona etsy amin’ny lapan’Anosikely, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra, omaly. « Anisan’ny efa milamina ny efitrano fivorian’izy ireo… Na izany aza, miandry ny birao maharitra ny fifanarahana momba ny birao fiasana etsy Ampefiloha sy ny trano hiantranoan’izy ireo eny Analamahitsy », hoy izy ireo. Mety hanampy mpiasa koa ny eo anivon’ny birao maharitra, ankoatra ireo mpiasa efa ao amin’ny lapa maitso Anosikely.